Ikhaya » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Kitts Inzuzo ebalulekileyo ekuVuleleni uKhenketho kwakhona
Abanye bathi iSt. Kitts indlela yokusebenzisa ukhenketho ngexesha lobhubhane yayinzima kakhulu, kodwa iziphumo ziyazithetha
Kitts Umphathiswa Wezokhenketho uLindsay Grant utyhile i-St. Kitts kunye ne-Nevis ithuba lokuvula kwakhona ishishini lokhenketho lwesiqithi
Ikhefu endaweni yindawo ekujongwa kuyo indlela yaseSt. Kitts kulwakhiwo ngokutsha. Kuza neseti yezixhobo zokugcina ukhenketho lukhuselekile.
Ayisihlabathi nje kuphela nolwandle, kodwa iminyaka engama-500 yembali, kunye namava akhuselekileyo eCaribbean akakho omnye owenza iSt. Kitts indawo eyodwa
Mamela kwi-Q & A.
Amatyala angama-41 ewonke ukusukela oko kwaqhambukayo iCoronavirus, akukho namnye owaswelekayo, ongazange atshixwe, kwaye yonke into ivulekile.
Ezi zibalo maninzi indawo ekuyiwa kuyo ibinokuphupha kuphela ngamaxesha okuhla unyuka kwinto eyenzekayo ngenxa ye-COVID-19
Umanyano lwe ISt. Kitts kunye neNevis lilizwe elikwiMpuma yeCaribbean elizimeleyo kwi-UK ngo-1983. Abemi abangama-53,000 beli lizwe bonwabele enye yeepasipoti eziphambili zokuba nokufikelela ngaphandle kwe-visa kuninzi lwehlabathi.
Iikhilomitha ezili-100 zomhlaba ezinamabhishi amahle kakhulu, iindawo ezimangalisayo, kunye nembali esusela kwiminyaka engama-300 ukuya kwengama-500, iSt.
ISt Kitts kunye neNevis Umphathiswa WezokhenkethoEzothutho namazibuko Mhlonishwa. ILindsay FP Grant yajoyina eTurboNews Ingxoxo namhlanje yeqela lokwakha. uhambo oluququzelelwe yiNethiwekhi yezoKhenketho yeHlabathi. I-WTN ineengcali zokhenketho kumacandelo abucala nakurhulumente kumazwe ayi-126 phakathi kwamalungu abo.
I-60% ye-St. Kitts kunye ne-GDP ye-Nevis ixhomekeke ngqo kushishino lokhenketho ngokuthe ngqo nangokungathanga ngqo. I-COVID-19 yeza nocelomngeni olukhulu, kodwa esi siqithi sincinci sasikwazi ukugcina abemi, abahlali kunye neendwendwe zikhuselekile.
Ilizwe layivala imida yalo okwexeshana ngowama-2020 kodwa laphinda lavulwa nge-31 ka-Okthobha. UGrant wathi yayiyindlela yonke yoluntu xa sasivula. Wonke umntu uzilungiselele kwaye wonke umntu ebenendima ekufuneka eyidlalile ukuphinda aqale ishishini lokuhamba nelokhenketho ngendlela ekhuselekileyo nenenkathalo.
Xa ilizwe lavula inkqubo yokukhangela ephucukileyo yayikhona. Abakhenkethi babengenalo ithuba lokuxubana kwiindawo zasekuhlaleni, kwaye iihotele zithathe inxaxheba kwinkqubo eyayibizwa ngokuba yi "Vacation in Place"
I-COVID-19 yayinyanzelekile ngaphambi kokufika. Uvavanyo lwesibini lwalufuneka emva kweentsuku ezisi-7. Iintsuku zokuqala eziyi-7 zokutyelelwa kwesi siqithi zazithintelwe ehotele.
Ngenxa yoko ilizwe alikabhubha ngenxa yentsholongwane.
Yiva kumphathiswa ngokuthe ngqo kule Q&A ngu Inethiwekhi yoKhenketho yeHlabathi.